युगसम्बाद साप्ताहिक - सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा
Monday, 04.06.2020, 02:13pm (GMT+5.5) Home Contact
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा
Monday, 01.09.2012, 03:30pm (GMT+5.5)
आजको राजनीतिक गतिविधि हेर्दा जातीय संघवादीहरूले सर्वसाधारण जनतामा विभाजनको मनस्थिति तयार पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर यथार्थ के हो भने जनता वास्तविकताबाट अनभिज्ञ छन् । जातीयता र संघीयताका दुष्परिणाम जनताले बुझ्नै पाएका छैनन् । अझ भनौं– जातीयता र संघीयताका नारा लगाउनेहरू नै भ्रमित छन् । ‘एकै उद्देश्य हाम्रो विपुल चहकिलो पार्नु नेपाललाई’ हुनुपर्नेमा यो कताको हावाहुरी हो कुन्नि, छिन्नभिन्न पार्ने कुलक्षण देखिंदैछ । साझा उद्देश्यमा कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै खास कारण केही पनि देखिंदैन । त्यो साझा उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीको कल्याणको बाटो हो, तर आज हामीकहाँ त्यसबाट विचलित पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेकाले हामी नेपाली सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
युगौंदेखि मिलेर बसेका हामी नेपालीबीच किन पृथक्ताको बीऊ रोप्न खोजिंदैछ र यसमा ककसको स्वार्थ छ ? यहाँ सरकार जुनसुकै दलको भए पनि उसले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर काम गर्नुपर्ने हो । त्यो के भने– अल्पसंख्यकलाई आरक्षण र अग्राधिकार दिएर रिझाएको भरमा राजनीति गर्छु भन्दा ठूलो संख्या नपिरियोस् भनेर पनि सोच्नुपर्ने हो । अशिक्षित, पीडित, सुकुम्बासी सबै जात वर्गमा छन्, कुनै एउटा दुईटामा मात्रै होइन । समान रुपले सबैलाई उठाउनु र थिचोमिचो हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो । कुनै जात, समुदायका माग प्रतिदिन बढ्दै जाने र नाजायजै भए पनि सरकार झुक्दै जाने हो भने त्यो असाध्य रोग हुनेछ, जस्तो अहिले मधेशवादी दलका (जो सरकारमै छन्) सम्बन्धमा भैरहेको छ ।
गतिला सरकार भएमा मुलुकमा जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई पहिल्याएर प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छन् र जनताका माग पूरा गर्छन् । यहाँ भने जनताका समस्या र मागको कुनै वास्तै नराखी प्रधानमन्त्री बाबुराम मधेशी दलका मन्त्रीकै माग पूरा गर्नकै सास्तीमा छन् । ती माग पनि मधेशका जनताका दुःख, पीरसंग सम्बन्धित नभएर कुनैको बीस वर्ष कैद माफी मिनाहा गराउनुपर्ने, कुनैलाई पक्राउ हुनबाट जोगाउनुपर्ने र कुनैलाई जेजस्ता मुद्दा अदालतमा भएपनि मन्त्री पदमा कायमै राख्नुपर्ने, नमाने सरकारबाट अलग हुन्छौं भनिदिएपछि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको आसन डगमगाउने कस्तो अप्ठ्यारो विचरा प्रधानमन्त्रीलाई !
त्यसैले त अनुचित मागलाई पनि आँखा चिम्लेर पूरा गर्दै आउनुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले । त्यस्ता बचनबद्धताले भोलि वा आजै राष्ट्रको जीवनमा के कस्तो असर पार्छ र पछि आफैंलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्छ भनेर सोच्ने फुर्सदै प्रधानमन्त्रीलाई छैन । मौका यही हो भनेर माग तेस्र्याएका तेस्र्याएकै छन् । कुर्सी जोगाउन पनि मन्त्रीहरूका निजी स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक माग पूरा गर्नैप¥यो । कस्तो मुलुक हो कि ! मन्त्रीहरूकै माग पूरा गरेर मात्रै कुर्सीमा अडिन पाइने । तपाईं ठीक बेठीक के हो ? भनेर सोच्न थाल्नुभयो कि जागीर गयो । धन्य प्रधानमन्त्री अडिनु भयो ।
अब सुरुकै प्रसङ्गमा जाऔं । हिजोआज प्रत्येक जातिलाई छुट्टै राज्य चाहिने श्यालभाका सुनाइदैछ । यो देशमा जातीय विभेदका कुरा उठाएर विभाजन र विखण्डन ल्याइदिने बाहिरियाको खेल हो भन्ने यथार्थ हामीमध्ये कमैलाई थाहा होला । त्यसभित्र यहींका लाउकेहरूको राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिएकै छ । यिनीहरूले राज्य भनेको यहाँ भएका सम्पूर्ण जातका सामथ्र्य हुने जोसुकैले चलाए पनि हुन्छ र चलाउँदै आएकै छन्, टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडेर राज्य चल्दैन भन्ने कुरा बुझेर पनि स्वार्थवश बुझपचाइरहेका छन् । आफ्ना परम्परागत पोशाकका आधारमा जात भनिएको भए पनि काम त सबैले सबै नै गरेकै छन् । गुरुङ मन्त्री भए पनि उसको भेडी गोठमा ब्र्राह्मण गोठालो पनि बसेकै छ । भोटेको चौंरी गोठमा मगर गोठालो पनि बसेकै छ । गणतन्त्र आयो भन्दैमा हिमाल चढ्न छोडेर शेर्पा खेत जोत्न मधेश त झर्दैन । थकालीका जस्तो होटेल चलाउने सीप अरुमा कमै होला । पठनपाठन, पूजापाठ छोडेर ब्राह्मण हिमाल चढ्न जाने पनि होइन, न त मुसहर नै खेत खन्न छोडेर पहाडतिर ठडिन्छ । नेवार र मरवाडीका जस्तो व्यापारको सीप अरुमा कमै होला अर्थात् यस्ता गुण र स्वभाव संस्कारगत भए पनि बाध्यताले र अपवाद त जहाँसुकै हुन्छ । भन्न खोजेको के भने हाम्रो जातित्वको मिश्रण चाखलाग्दो र उदाहरणीय पनि छ । त्यसैले राज्य व्यवस्थामा भाँडभैलो मच्चाएर विखण्डन गराउन खोज्नेहरूको चालवाजी बुझेर हामी होसियार हुनैपर्छ ।
अपवाद बाहेक जुन जात, जुन काममा दक्षता छ र रुचि राख्छ त्यसैले त्यो काम निष्ठापूर्वक ग¥यो भने सफल पनि भएकै छ । राजकाज चलाउने काममा चाहिने दक्षता बेग्लै हुन्छ र त्यो सबैमा नभए पनि प्रत्येक जातका केही न केहीमा नैसर्गिक रुपमै पाइन्छ । इच्छा र सामथ्र्य हुनेले गर्नसक्ने काम सप्पैले गर्नुपर्छ भनेर वाध्य पार्न सकिंदैन र हुँदैन पनि । जातका आधारमा राज्य बाँडेर विशेषाधिकार दिंदैमा त हुँदैन नि । नेपाल एउटा राष्ट्र हो, केवल विभिन्न जातको भीड मात्रै होइन । हामी सबै मिलेर नै यो राष्ट्र बनेको हो । त्यसैले हामीबीच विभेद ल्याउने तत्वलाई चिनेर हामीले वहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी यो देशका नागरिक हौं, बाहुन, गुरुङ, यादव, राई, थारु इत्यादि भनेर होइन । हाम्रो सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान छ यो देशका नागरिकका नाताले । राष्ट्रिय पहिचान र जातीय, प्रान्तीय या धार्मिक पहिचान बेग्लै कुरा हुन् भने सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान चाहिं मूल कुरा हो । त्यसैले राष्ट्रिय पहिचान गुम्ने काम कहीं कतैबाट पनि हुनुहुँदैन । सानो ठूलो भन्ने कुरा पनि आचरणबाट छुट्टिनुपर्दछ । घटिया काम गर्छ भने त्यो ठूलो जात हुँदैन । त्यसैले शुद्ध आचरण गर्छ भने कोही पनि तल्लो जात हुँदैन ।
त्यसकारण जाति, भाषा, धर्म, प्रान्त र समुदायको बखेडा झिकेर देशमा भाँडभैलो मच्चाइदिनेहरूको देश टुक्र्याइदिने जाल–प्रपञ्च बुझेर संघीयताका दुष्परिणामप्रति सचेत हुनुपर्छ । जातीय संघीय राज्य विदेशीका इशाराको नेताहरूको स्वार्थको माग हो । विभाजनले कसैको भलो गर्दैन । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । सामाजिक विभेद हटाउनुपर्छ । सबैलाई समान सुविधा र अवसर जुटाइदिनुपर्छ । देश टुक्र्याएर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै मेटाउने काम गर्न हुँदैन । जनता मिलेर बस्न चाहन्छन् । नेताले स्वार्थ मात्रै हेरेका हुनाले यहाँ अनर्थ हुन आँटेको हो । जातीय संघ राज्यबाट समस्या समाधान हुँदैन, बरु नयाँ नयाँ समस्या उब्जेर देशै संकटमा पर्नसक्ने हुनाले नेताहरू होसमा आऊन, आवेशमा कुनै काम नगरुन् ।